Finland waxay ku nooshahay waqtiyo xasaasi ah waana inaan awooda saarno baahida qof walba sidii loo dabooli lahaa.
Helsinki oo sii xoogaysata
Finland waxay ku nooshahay waqtiyo xasaasi ah waana inaan xooga saarnaa inaan buuxinno baahida qof walba.
Helsinki oo sii xoogaysata waa in loo horumariyaa dhaqaale ahaan, bulsho ahaan iyo bey’ad ahaanba. Waa inaan ku dadaalnaa isdhexgal qorshaysan in la sameeyo, shaqaalaynta oo sare loo qaado iyo koboc waara. Waxaan u baahanahay inaan maalgashano waxbarashada caruurta yar yar iyo tababarka. Waxaan ubaahanahay siyaasad cimilo badan oo hami leh. Taasi waa sababta ay Helsinki ii baahan tahay. Taasi waa sababta ay Helsinki noogu baahan tahay.
``Dareenka xoogan ee lahaanshaha iyo dareenka wadajirka ah waa jawaabta saxda ah ee caqabadaha waqtigeena lagaga hor tegi karo.``
"Ted waa musharax ammaan mudan. Waxba ma hakrado. Waa Muwaadin dulqaad badan. Waa shaksi ay u Helsinki u baahantahay."
- Sidaas waxaaa yidhi Prof. Alexander Stubb, Raiisel Wasaarihii hore ee Finland.
"Ted waa Xildhibaan Golaha deegaanka oo fiican, maxaa yeelay waa nin hubsiimo badan oo arrimaha ka sal gaadha. Wuxuu si dabiici ah ulashaqeeyaa dadka kale - guddihiisa Golaha Deegaanka iyo xisbiyada dhexdiisa. "
- Waxaa sidaas yidhi Ben Zyskowicz - Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka
Xoojinta dhaqaale wuxuu awood u siinayaa horumar ballaaran in uu Helsinki ka hir galo
1. Soo jiidashada iyo kaqeybgalka shaqaale xirfad leh Helsinki waxay abuureysaa aasaaska kobaca dhaqaalaha. Isdhexgalku wuxuu u baahan yahay isku-dar ah barashada luqadda, hagitaan iyo shaqo.
2. Fududeynta shaqaalaynta dadka da ‘kasta ha ahaadeene iyo taariikh kasta ha lahaadeene waxay hagaajineysaa bilic soo celinta magaalada, sidoo kale Sare u qaad heerka shaqada Helsinki, heerka caasimadaha kale ee Waqooyiga Yurub oo kale
3. Wax soo iibsiga dowladeed waa in lagu fuliyaa qaab cusub oo hufan si aan ugu maamuli karno dhaqaalaheena si masuuliyad leh. Wax soo iibsiga waa inuu u suurta galiyaa shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah inay kaqeybqaataan hindisooyin iyagoo u kala qaadaya qandaraaska dalal badan.
Xoojinta wadajirka bulshada waxay ku saleysan tahay sinnaanta aadanaha
1. Hubinta tayada waxbarashada carruurnimada hore ee dhammaan. Maalgeli helitaanka boosaska xanaanada caruurta, mushaharka waxbarashada carruurnimada hore iyo in la siiyo maalgelin gaar ah ka hortagga kala soocida.
2. Fududeynta isdhexgalka iyadoo diirada la saarayo xaqiijinta xuquuqda haweenka iyo helitaanka adeegyada luqadeed.
3. In laga takhaluso hadalada naceybka ah iyadoo la maalgalinayo adeegyada caafimaadka maskaxda, ciribtirka hoy la’aanta iyo kordhinta aqriska maaliyadeed ee heerarka iskuulka oo dhan.
Joogtaynta cilmiga deegaanka waxay ku tiirsan tahay cilmi baaris, waaqic iyo waxqabad
1. Maalgelinta dhaqdhaqaaqa waara iyada oo la kordhinayo isbeddelka habeenkii, oo awood u siinaya isticmaalka baaskiilada magaalada sanadka oo dhan iyo maalgelinta maalgashiga gaadiidka tareenka.
2. Diirada oo la saaro dhismaha sii xoojinteeda iyada oo la kordhinayo waxtarka tamarta iyo dhismaha alwaaxda, oo ay kujirto dhismaha kaabayaasha ah. Horumarinta aagagga Keski-Pasila iyo Östersundom in la hirgeliyo.
3. In kor loo qaado maareynta hantida maguurtada ah iyadoo sifiican looga faa’iideysto xogta iyo farsamada si loo saadaaliyo baahiyaha mustaqbalka. Qalab si fudud loo isticmaali karo ayaa loo abuuri doonaa si loo arko saameynta keydka hantida magaaladu leedahay, dayactirka iyo tirada dadka ee xarumaha xanaanada caruurta ee degmada sanadaha soo socda.
Garyaqaan lagu kalsoon yahay
Waxaan ahay 34 jir xayawaanka la saaxiib ah kuna nool xaafada Töölö. Waxaan wax ku bartay Jaamacadda Helsinki qareen ahaan ama sharci yaqaan sidoo kale London waxaaan ku bartay khabiirnimo ku ah siyaasadda Midowga Yurub. Anigu macno ahaan waxaan ahay dhulmareen: Laga soo bilaabo xanaanada waxaan ku dhigtay afar luqadood oo kala duwan, waxaanan ku noolaa London, Kaliforniya, Brussels, haddana mar labaad ayaan halkan ku noolahay gurigayga, Helsinki. Waxaan si adag u aaminsanahay in natiijooyinka ugu fiican lagu gaaro isdhexgalka kooxaha kala duwan. Waxaan kasoo shaqeeyay qaybaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah. Hadda waxaan ka shaqeeyaa qeybta saddexaad anigoo ah khabiir ku takhasusay siyaasadda ganacsiga, waxaan diirada saaraynaa sida koritaanka Finland loo dardargelin lahaa.
Hadda waxaan ahay xubin ka tirsan Golaha Magaalada kana mid ah Guddiga Waxbarashada iyo Tababbarka. Waxaa muhiim ii ah inaan siiyo carruurta wax wanaagsan oo nolosha ah dhaxal uga tagno: anigoo ugu talagay mooshinakaygii, aqoon akhriska maaliyadeed ayaa lagu kordhin doonaa Helsinki mustaqbalka dhammaan heerarka dugsiga, magaaladuna waxay qaadatay qiyaas sax ah oo ku saabsan tayada waxbarashada carruurnimada hore. Waxbarashada carruurnimada hore waa in loo arkaa inay tahay maalgashi mustaqbalka bulshada oo dhan.
Waxaan ka walwalayaa hadalada nacaybka ah ee sii kordhaya, cunsuriyada iyo kalsoonidaraa la abuurayo mustaqbalka. Doodda bulsheed ee muranka dhalisay iyo kalsooni darrada sii kordheysa ee siyaasadeed waxay sawir been ah ka bixineysaa go’aan qaadashada degmada. Markaad si adag u shaqeyso oo aad si wada jir ah uga wada shaqeyso qeybaha xisbiyada, waxaa suurtagal ah in la abuuro xaalado qof walba ku guuleysto. Waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo siyaasada uu qof walba ugu dhibaato ku keeneyn.
Ma mudanahay in aan mar labaad soo baxo?
Waxaan ka soo shaqeeyay Ururo kala duwan, kabadanlabaatan sano oo waayo aragnimo ah ururada ah ayaan haystaa. Waxyaabaha aan ka bartay waxaa kamida in siyaasada had iyo jeer waxqabad iyo wadajir lagu gaadhi karo guulo badan. Golaha deegaanka magaalada, sidoo kale waxaan ogaaday inaan ka wada shaqeyn karo danaha ummadda dhammaan qaybaha xisbiyada, taas oo shardi u ah go’aan qaadasho wax ku ool ah oo haddana wax ku ool ah. Muhiimadda ay leedahay dhismaha kalsoonida iyo ixtiraamka dadka kale lama soo koobi karo. Gaar ahaan adduunkeenna hadda kala-qaybsanaanta iyo kala-daadashada u badan, ee sababaya dareena kala duwan, hadal nacayb iyo cunsuriyad. Annagoo diirada saarayna furfurnaanta iyo isfahamka dadka kale iyo sida fikradaha kala duwan la isku wado, waxaan durbaba si wanaagsan u gaadhayna wadadeena bulsho siman, kala duwan oo loo dhan yahay.
Helsinki, Finland iyo saaxadda siyaasadeed ee caalamiga ah waxay u baahan yihiin go’aan qaadasho waarta. Go’aan qaadashada waara waxay u baahan tahay khibrad, khibrad iyo fikir hore u qaadasho. Waxaan ku soo ururay faham bulsho iyo waayo aragnimo intii aan u shaqeynayey qareen, waax dowladeed, iyo waliba jagooyin siyaasadeed oo kala duwan. Waxaan ku arkay meel dhow sida sameynta xeerar guud ay u saameeyaan nolol maalmeedka dadka si dhab ah.
Aniga oo kashaqeynaya xildhibaanka magaalada, waxaan bartay sida loo gaaro go’aamada loona noqdo hogaamiye wax ku ool ah. Awooddeyda waxaa ka mid ah qaab aqoon leh, is-dhexgal kalsooni-dhisid, iyo xirfado gorgortan oo wax ku ool ah. Hore u eegida, xalalka ayaa si wada jir ah aan u raadiyay: dhammaan dadaalladayda iyo dhiirrigelintayda waxay keeneen isbeddello ku saabsan horumarinta gaadiidka dadweynaha, maareyn maaliyadeed oo xoog leh ama tayada waxbarashada iyo tababarka oo kor u kobocda.
Marka lagu daro xirfadaha iskaashiga iyo khibradda, waxaan sidoo kale u baahanahay goaano geesinimo leh. Waa in aynaan dhayalsan muhiimadda ay Helsinki u leedahay magaalo caalami ah inay noqoto ama magaalada ugu soo jiidashada badan Finland. Waxaan u baahanahay inaan u aragno tan fursad oo aan ka faaidaysano. Helsinki horeyba way u ahayd magaalo caalami ah oo si habsami leh u koreysa, kaliya waa inaan sii xoojino oo aanu xooga saarno siday uga sii fiicnaan lahayd. Si aan caruurteena ugu siino dhaxalka ugu macquulsan ee mustaqbalka, waa inaan ku dadaalnaa sida ugu wanaagsan ee aan u saadaalin karno baahiyaha adduunka isbedelaya. Markaan fahamno saameynta fog ee isbeddellada kala duwan, waxaan awoodnaa inaan sameyno go’aanno siyaasadeed oo hufan. Sidan oo kale, waxaan ku dhisi karnaa Helsinki si wada jir ah oo aan uga qayb qaadan karnaa sida ay noqonayso Mustaqbalka inshallah. Magaalada waa inay noqoto- mid qof walba kartidiisa looga faa’iideysto oo shakhsiguna ku har mariyo tiisa.
Sannadihii la soo dhaafay waxay siyaasadu waxay iga dhigtay shakshi la-qabsan kara xaal walba lana iman kara isku xirnaan siyaasadeed oo khibrad badan leh taasina waa mid aan muujiyay aqoonteeda,sida loo sameeyo, sidoo kale saamaynta iyo muhiimada iskaashigu yahay waa wax muhiim ah in dadkaa idil iska kaashado hormarka magaaladeena. Jawiga shaqadeyda ugu habboon, waxaan ku shaqeeyaa aragti fog oo mustaqbalka ah, xallinta duruufaha dadka ee kala duwan iyo ku guuleysiga yoolalka guud dadka ka wada dhaxeeya. Mabaadi’daas waxaan ka soo shaqeeyay muddadan golaha aan ku jiray si kor loogu qaado siyaasadda dhaqaale, bulsho iyo bey’adeed.
Sidaa darteed waxaan kaa codsan lahaa Walaal inaad kalsoonida isiisid oo aad ii codaysid si aan u sii wato shaqada dhiiranaanta leh ee aan ka hayay Golaha deegankaMagaalada caasimada Helsinki, si aan usii xoojino dadaalada kala duwan. Mahadsanid.